အငွေ့ XPS ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ - လက်စွဲစာအုပ် +
ပင်မစာမျက်နှာ » ခိုးငှေ့ » ငွေ့ XPS ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာအုပ်
ငွေ့ XPS ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲစာအုပ်
Posted by ကိုfazlul မေလ 14, 2020 မေလ 14, 2020 မှတ်ချက် Leave ငွေ့ XPS ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲပေါ်မှာ
VaporX®သည်သင်၏အခြားရွေးချယ်စရာဆေးလိပ်သောက်ရန်လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုထားသောအကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်ငွေ့ဓာတ်ငွေ့များကိုသင့်အားပေးအပ်သည်ကိုဂုဏ်ယူသည်။ VaporX ®အငွေ့ပျံသူများသည်သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံတွင်တော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာတိုင်းတွင်စတိုင်ကျစွာကစားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် lithium ion battery ဖြင့်စွမ်းအားရှိသောကြောင့်သင်၏ VaporX ®သည်သင်လုပ်သမျှနေရာတိုင်းသို့သွားနိုင်သည်။ VAPOR eXperience စစ်စစ်ကိုသွားကြည့်ပါ။
XPS သည် XLT နှင့် XRT အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ IVAPORX.COM သို့လာရောက်ပြီးကိုယ်ပိုင်စုပ်ယူသူများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏စုဆောင်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်အငွေ့ပျံမှုဆိုသည်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့မှမဟုတ်ဘဲအငွေ့ပျံစေခြင်းဟုခေါ်သည့်အက်တမ်အရောအနှောအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရှူရှိုက်မိနိုင်သောငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ layman ၏အသုံးအနှုန်းများအရ၊ သင်သည်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ရှူမိသောအခါ၊ ယူနစ်၏ဘက်ထရီ Controller မှအာရုံခံကိရိယာသည်ဘက်ထရီကိုဖွင့်ရန်ပြောသည့်မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်အက်တမ်ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးသင်အလိုရှိသောအရာဝတ္ထု (e-liquid, oil) ကိုအငွေ့ပြန်စေသည်။ သင်၏VaporX®ပုံစံပေါ် မူတည်၍ ခြောက်သွေ့သောပျိုးပင်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ vaporx xps ကဘာလဲ ?
သင်၏ xps ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါ XPS သော့လာ!
VaporX® XPS သည်“ သော့ခတ်ထား” သည်။ သင်၏ယူနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုရန်ဤလက်စွဲစာအုပ်၏နောက်စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသော“ သော့ဖွင့်ခြင်း” ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
THE XPS တချို့ရဲ့လိုအပ်!
ပြီးရင်သော့ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ XPS ကနေရှူရှိုက်မိတဲ့အခါ“ အငွေ့” မရှိဘူးဆိုရင်၊
၁) tank ထဲသို့ VaporX Formula1 X-Juice ကိုထည့်ပါ (စာမျက်နှာ ၁၁ တွင်ကြည့်ပါ)
၂။ သင်၏VaporX® XPS Vaporizer ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပါ (စာမျက်နှာ ၇ တွင်ကြည့်ပါ)
သင်၏ vaporx xps ကိုသော့ခတ်ခြင်း
VaporX®၏ XPS သည်ယူနစ်၏ပါဝါခလုတ်နှင့်မတော်တဆထိမိခြင်းမှကာကွယ်ရန်သော့ခတ်အင်္ဂါရပ်နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်တရားဝင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအသက်မပြည့်သူများမှဤကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်ကလေးသူငယ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိတ်ရန်: VaporX's power ခလုတ်ကို (၆) ကြိမ်အလျင်အမြန်နှိပ်ပေးပါ။ သင်၏အငွေ့ပျံသော့ခတ်နေသည်ကိုညွှန်ပြရန်အတွက်ညွှန်ပြမီးသည် (၃) ကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။
သော့ခတ်ရန်: ယူနစ်၏ပါဝါခလုတ်ကိုခြောက်ကြိမ် (၆) ကြိမ်အလျင်အမြန်နှိပ်ခြင်းနှင့်ညွှန်ပြမီးကိုသုံးကြိမ် (၃) ကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်ပြုလုပ်သည့်တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။
သင်၏ VAPORX B ဘက်ထရီကိုအားသွင်းပုံ
သင်၏ VaporX's battery အားအားသွင်းရန်အတွက် XPS Starter Kit တွင်ပါ ၀ င်သော USB charger ကိုထည့်သွင်းပါ။ USB charger ကိုကွန်ပျူတာ (သို့) အခြားအထောက်အကူပြုကိရိယာများတွင်တွေ့ရသောမည်သည့် live USB port မဆိုအားသွင်းပါ။ ဘက်ထရီ၏ LED မီးသည်အားသွင်းရန်စတင်ကြောင်းပြသရန် (၅) ကြိမ်ကြိမ်ပြပါလိမ့်မည်။ USB charger ပေါ်ရှိအချက်ပြမီးသည်ဘက်ထရီကိုအားအပြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်အစိမ်းရောင်ပေါ်လာပါမည်။
သင်၏ VAPORX ဓာတ်ခဲကိုအားသွင်းခြင်း (con't)
ကန ဦး တာဝန်ခံ: သင်ချက်ချင်းVaporX® XPS Vaporizer ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်အမြင့်ဆုံးထားရှိနိုင်ရန်အတွက် USB ၏ညွှန်ပြမီးသည်အစိမ်းရောင်မပြတ်မှီတိုင်အောင် USB X ၏အားသွင်းခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြံပြုပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲအခကြေးငွေများ XPS ၏ LED အလင်းသည်ဆယ် (၁၀) ကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်သောအခါယူနစ်အားပြန်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီစွဲချက်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်နာရီကြာသင့်သည်။
ဘက်ထရီ - အပိုဆောင်းအချက်အလက်
XPS Vaporizer သည်ခလုတ်ကိုသင်ကြိုက်သလောက်ကြာရှည်စွာခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၁၀ စက္ကန့် (၁၀) စက္ကန့်အကြာတွင်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ အပြာရောင်မီးသည် (၁၀) စက္ကန့်ဆက်တိုက်အကြာငါးကြိမ် (၅) ကြိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက်ယူနစ်ကိုပိတ်ပါ။ ဤသည်အငွေ့ပျံမဆိုပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏VaporX® Vaporizer ကိုအသုံးမပြုပါက“ lock” အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးလိုသည်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယူနစ်သည်မတော်တဆသက်ဝင်မှုမရှိပါ။
xps - e- အရည်အငွေ့ပျံ
VaporX® XPS VaporX® Formula51 E-Juice နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံး e-liquid ဖြေရှင်းချက်အများစုအတွက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ XPS Vaporizer Starter Kits တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tank Cartomizer တပ်ဆင်ထားပြီးအကောင်းဆုံး e-liquid vaping အတွေ့အကြုံအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
E-JICE အနံ့အရသာနှင့်အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းရန်ကြည့်ရှုရန် IVAPORX.COM သို့လာရောက်ပါ။
XP - tank cartomizer
သင်၏ TANK CARTOMIZER ကိုမည်သို့ဖြည့်ရမည်နည်း
၁။ တိုင်ကီ၏ပါးစပ်ကိုဖွင့ ်၍ ဖယ်ထုတ်ပါ။
2) မျက်နှာပြင်မှာတစ် ဦး အပေါ်အကြံပေးအဖွဲ့ catomizer ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
၃။ သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော VaporX e-Juices ပုလင်း၏ spout ကိုအသုံးပြုထားသော tank cartomizer အားလုံးကိုသင်လိုချင်သောအတိုင်းအတာအထိအသုံးပြုခြင်း - ၁.၆ မီလီမီတာအမှတ်အသားကိုတင့်ကား၏ဘေးထွက်တွင်ထားပါ။
၅) သင်၏VaporX® XPS ဘက်ထရီကုန်ဆုံးချိန်တွင် tank cartomizer ကိုဆွဲပါ။
၆။ စစ်မှန်သော VAPOR အတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
သင်၏VaporX® Personal Electronic Vaporizer ကိုအသုံးမပြုမီအောက်ပါလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ပါ။ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲကိုအနာဂတ်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်လုံခြုံသောနေရာတွင်ထားပါ။
VaporX ®ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်အငွေ့ပျံစေသောကိရိယာသည်ကလေးများ၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသောအမျိုးသမီးများ၊ သို့မဟုတ်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောရောဂါများရှိသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤကိရိယာသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ မည်သည့်ရောဂါသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများကိုမဆိုရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ကုသရန်၊ ကုသရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေသောကိရိယာမဟုတ်ပါ။ သင့်တွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများသို့မဟုတ်ပြissuesနာများရှိပါကVaporX® Personal Electronic Vaporizer ကိုမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ (con't)
သင်ဆေးလိပ်မသောက်သူဖြစ်လျှင်သင်၏ပြည်နယ်၊ သင်ရှူရှိုက်မိသည့်မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုမျိုးကိုမဆိုဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ခံစားမှုပြသခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ်သို့မဟုတ်သင့်တွင်နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို၊ သွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိပါက။
Vapor Corp. သည် VaporX ®ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်အငွေ့ပျံစေခြင်း၏တာ ၀ န်မဲ့၊ မမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
VaporX ®ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်အငွေ့ပျံစေသည့်ဆေးဝါးများနှင့်တရားမ ၀ င်ပစ္စည်းများနှင့်အသုံးပြုရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ဤစက်ကိရိယာအားတရားမဝင်အသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူအားသင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဒဏ်ငွေ၊ ပြစ်ဒဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်ထောင်ချခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။
VaporX® Formula51 X-Juice ကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်မျိုချခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ နီကိုတင်းသည်အလွန်မြင့်မားစွာစုစည်းထားသောကြောင့်အငွေ့ပြန်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများတိုးလာသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှသာပြုလုပ်ရမည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်သတိမဲ့စွာအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ဤထုတ်ကုန်တွင်နီကိုတင်း၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှသိသောဓာတုဗေဒတွင်မွေးဖွားခြင်းနှင့်အခြားမျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှအတည်ပြုမထားပါဘူး ကလေးများလက်လှမ်းမမီသိမ်းဆည်းထားပါ။ သင်သည်သင်၏ပြည်နယ်ရှိတရားဝင်ဆေးလိပ်သောက်သည့်အသက်အရွယ်အောက်ရောက်နေလျှင်ဤထုတ်ကုန်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အထောက်အကူမဟုတ်ပါ။
ငွေ့ -XPS- လက်စွဲစာအုပ်ဒေါင်းလုပ်
သင်၏လက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ? မှတ်ချက်များအတွက်တင်!
ငါနှင့်ငါ့ Dell - Inspiron, XPS နှင့် Alienware များအတွက် EMC Inspiron, XPS နှင့် Alienware ကွန်ပျူတာများအတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ Dell ...
Posted by ကိုfazlul မေလ 14, 2020 မေလ 14, 2020 Posted in,ခိုးငှေ့Tags: ခိုးငှေ့, XLT, XPS, XRT
Soundpeats TrueCapsule အသုံးပြုသူလက်စွဲ
Hamilton သဲသောင်ပြင်သီးနှံ Citrus ဖျော်ရည်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
tp-link ကြိုးမဲ့ N Router ထည့်သွင်းမှုလမ်းညွှန်
HIKVISION ပြင်ပကွန်ယက် PTZ အမြန်နှုန်း Dome ကင်မရာအသုံးပြုသူလက်စွဲ
MONOPRICE 23 Kettle မီးသွေးကင်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
anko နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Sapace စက်ရုပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ
HyperX QuadCast S အသုံးပြုသူလက်စွဲ
ရှင်ပေါလု Bourassa on Bissell 15D1 စီးရီး Easy Sweep အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
Hamilton က on Google Home Mini Manual